MOH - Help Sign In
MOH > Afaan Oromoo > Help
Portali kana kessatti odeeffannoo mootumma , ragaleewwan,bifoota fi tajaajiloota gosa adda adda ni’argattuu.akkasumas walittidhufenya mootumma fi sablammii kan biyya biraa wajjiin isiin dandeesisaa.
kasumas kutaalee armaan gadittii ofkeessati qabateeraa. Isaanis:- <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
· Tajaajiloota:- kuta kana keessat karaa mootummatin kan kennamuu tajaajila kan dhayachuu qaban haala fi ragalee ni argattuu.
· Wa’ee mootumma:- Kuta kana keessatti ragalee filatamaan niargattuu.
· Wa’ee Itoophiyaa:- Kuta kana keessatti wa’ee Itoophiyaa odeeffannoo filatamaan niargattuu.
· Bifaawwan:- Kuta kana keessatti bifaawwan filatamaan niargattuu dawoonlodii kan gadhamuu bifaoota gara gara.
· Ragalee:- Kuta kana keessatti ragalee filatamaan niargattuu.
· Oduu jijiramman:- Kuta kana keessatti oduu ammaayaa gurguddoo filatamaan niargattuu.
· Hirmannaa fi waliqunamitti tartibaa: kunis fuula hirmaanna fuula ePartisipashin ,innis kan qabatee tokkumma fi walittidhufenya gara fuldurtii portalitti fayyaadamudhaf. · Kuta lammileewwanii fuula jiduugaleessa kan qabatee tajaajila kennamuu karaa garee mootumma mataduredhan.
· Tartibaa Multimedia :fuulli kunis kan qabatee galmee sagalee,viidoo fi galarii suura gosa gara garatidha. · Oduu: oduu ammayya kan ministeera. · Walqabsistuun kara harkaa mirgaa kun kan qabatee kuusa oduu,wantoota, ministeera jalaattii warra bulan fi beeksisadha